Soo dejisan Krita 4.3 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaKrita
Bogga rasmiga ah: Krita
Krita – a editor naqshadeynta awood badan si ay ula rinjiyeynta digital shaqeeyaan. software waxay leedahay set badan oo ah qalab iyo filtarrada kala duwan si ay u abuuraan ama images edit. Krita u saamaxaaya in ay la raster iyo dulinka naqshadeynta, image muraayad maro, qaabab kala duwan ku dahaadhaa, shay shaqsi, iwm software The taageertaa qaabab image caanka ah oo lagu daydo midabka shaqeeyaan. Krita sidoo kale siisaa qalab badan oo dheeraad ah si reserved software ee baahida shakhsi ahaaneed ee user a.
kala duwan ee qalabka ranjiyeynta
filtarrada iyo saamaynta for image processing badan oo
Tiro badan oo ka mid ah goobaha
Taageerada qaabab image kala duwan oo lagu daydo midabka
Soo dejisan Krita
Faallo ku saabsan Krita
Krita Xirfadaha la xiriira
Ditto – softiweer si loo xoojiyo gogosha. Sidoo kale, softiweerku wuxuu isweydaarsadaa xogta shabakada maxaliga ah ama internetka.